အသက် ၃၀ မတိုင်ခင် လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာ စာအုပ် (၃၀) - Myanmar Network
Posted by chomarwin on August 23, 2011 at 11:56 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
Thanks for sharing this article from mail.
အောက်မှာ ကမ္ဘာ့ပညာရတနာသိုက်အဖြစ် တစိတ်တပိုင်း ရည်ညွှန်းနိုင်မည့် စာအုပ်စာရင်းကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အသက် ၃၀ မွေးနေ့ရက် မတိုင်မီ လူတိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ် (၃၀) ဟု Foreign Policy ဂျာနယ်က ညွှန်းဆိုထားပါသည်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်လာမယ့် အစိုးရများရဲ့ ကြောက်မယ်ဖွယ် သရုပ်သကန်ကို စာရေးသူက ၁၉၄၉ ခုနှစ်မှာ ကြိုတင်ရေးသား သတိပေးခဲ့တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ လူထုနဲ့ နိုင်ငံသားများအပေါ် အမျိုးမျိုး လိမ်လည်လှည့်စား ထောက်လှမ်းရေးလုပ်တဲ့ 'အားလုံးသိ-အစိုးရတွေ' ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အပြုအမူစရိုက်တွေကို အကောင်းဆုံး ဖော်ပြနိုင်တာကြောင့် ယနေ့တိုင် အမြဲချီးကျူးကြရတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ် အမေရိကန် တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာ လူမျိုးရေးနဲ့ စီးပွားရေး ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ပြဿနာများကို တင်ပြထားသည်။ အဓမ္မပြုကျင့်တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ရတဲ့ လူမည်းတစ်ဦးနှင့် အဓမ္မပြုကျင့်ခံရသူ လူဖြူအမျိုးသမီးငယ်တို့ရဲ့ တရားရုံးနောက်ခံအမှု ဖြစ်သည်။ တရားမျှတမှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း အစွဲအာဃတတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့၊ အတွေးအခေါ်များစွာပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်သည်။
ဒီစာအုပ်ကနေ ကျော်ကြားတဲ့ ကိုးကားစရာတစ်ခုက "လူဟာ လွတ်လပ်စွာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ နေရာတိုင်းက သူနဲ့ ဆက်စပ်ပတ်သက်နေတယ်" ဆိုတာ ဖြစ်သည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တစ်ဦးချင်းရဲ့ အရေးပါမှု အခန်းကဏ္ဍကို တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၁၇၆၂ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ ရူးဆိုး ရဲ့ "လူမှု ပဋိညာဉ်' စာအုပ်က ပြင်သစ်နဲ့ ဥရောပမှာ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၊ တော်လှန်ရေးများကို ဖြစ်ပေါ်အောင် လှုံဆော်ပေးခဲ့သည်။
သေးငယ်တဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခု၊ အယူအဆတစ်ခု၊ ထုပ်လုပ်မှုတစ်ခုက ဗိုင်းယပ်စ်လို ပြန့်နှံပြီး၊ ပဉ္စလက်ဆန်ဆန် ဂလိုဘယ် လူမှုအပြောင်းလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာ၊ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ဦးမှာကို တင်ပြထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၊ စာအုပ်ကော်ပီ ၁.၇ သန်းကျော် ရောင်းခဲ့ရသည်။
၂၀ ရာစု အင်္ဂလိပ်စာပေသမိုင်းမှာ ပေါ်ပြူလာအဖြစ်ဆုံးနဲ့ ဩဇာအကြီးဆုံး ၀တ္ထုစာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်သည်။ စာအုပ်ကို ကိုင်ကြည့်ရုံနဲ့ တစ်အုပ်လုံး ပြီးအောင် ဖတ်ဖြစ်အောင် စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်များမှ ဂျက်ဇ် တေးဂီတခေတ်ကို နောက်ခံထားပြီး၊ နာမည်ကျော် 'အမေရိကန် အိပ်မက်' ကို တင်ပြထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေများစွာရှိတဲ့အနက်၊ မိတ်ဆွေကောင်း အနည်းငယ်က ပိုတန်ဖိုးရှိပုံမှာ စာဖတ်သူများအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာ ဖြစ်သည်။ နောက်ပြီး၊ ဘ၀မှာ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာကို ထမြောက်အောင်လုပ်ဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။
ကာရာမာဇော့ဗ် ညီအစ်ကိုများ စာအုပ်ရေးသူ၊ ရုရုားစာရေးဆရာ ဒေါ့စတိုယဗ်စကီး က ဆာဘီးယားမှာ ပြည်ပြေး ၅ နှစ်နေပြီးနောက် ရုရှားကိုအပြန်၊ ၁၈၆၆ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေတဲ့ လူငယ်တစ်ဦးရဲ့ စိတ်ဒေါသ၊ ကိုယ့်ကျင့်တရား ပြဿနာနဲ့ ငွေအတွက် လူသတ်လိုမှုတွေကို ဖော်ပြတဲ့ ၀တ္ထုကောင်း ဖြစ်သည်။
ဒီစာအုပ်မှ ကျော်ကြားတဲ့ စာသားတစ်ခုကတော့ "လွတ်လပ်စွာ အသက်ရှင်လိုတဲ့ ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ငါ တောထဲကို သွားခဲ့တယ်။ ဘာတွေ သင်ယူနိုင်မလဲဆိုတာ ငါကြည့်ခဲ့တယ်။ ဘာမှ သင်ယူစရာ မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့၊ ငါသေခါနီးမှာ ငါရဲ့ ဘ၀ကို ကောင်းကောင်း မရှင်သန် မနေထိုင်ခဲ့ဘူး ဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်"
ဘ၀ကို ဘယ်လိုနေထိုင်သင့်သလဲ၊ တရားမျှတမှုကို ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သင့်လဲ၊ သူရသတ္တိဆိုတာ ဘာလဲ၊ ခေါင်းဆောင်တွေက ဘယ်လိုဦးဆောင်မှုပေးသင့်သလဲ စတဲ့ အချေအတင် ဆွေးနွေးထားချက်များကို ဂရိဒဿနပညာရှင် ပလေတို က တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ပလေတိုက သူ့ဆရာ ဆော့ခရတ္တိ ကို ခေါင်းဆောင်တင် ရေးသားထားပြီး၊ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံရေးသီအိုရီကို နားလည်ဖုိ့အတွက် အခြေခံဖြစ်သည်။ ဆရာဇော်ဂျီ က ပလေးတိုးနဒါန်း အဖြစ် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အောင်မြင်ရေး တက်ကျမ်းစာအုပ်များထဲတွင်တော့ အကြီးကျယ်ဆုံး စာအုပ်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆက်ဆံမှုများတွင် ကိုယ့်ဖက်ပါအောင် သိမ်းယူစွဲဆောင်နိ်ုင်ဖို့အတွက် အလွယ်တကူ ညွှန်ပြနိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ဦးနုနှင့် ဗမိုးတို့က မြန်မာပြန်ဆိုခဲ့ကြသည်။
ကောင်းမှုနဲ့ မကောင်းမှုကြား ပဋိပက္ခလွန်ဆွဲမှုကို ဖော်ပြရင်း ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေး တင်ပြထားတဲ့ ရုရှား ၀တ္ထုဖြစ်သည်။ လောဘ၊ အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ လိမ်လည်လှည့်စားမှုများမှာ လူ့သဘာဝနှင့် ဆက်နွယ်နေကြောင်း တင်ပြတဲ့ စာအုပ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဆိုဗီယက်ခေတ်ကို သရော်တဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး လန်ဒန်တိုင်းမ်း သတင်းစာက ၂၀ ရာစုရဲ့ အကောင်းဆုံးဝတ္ထုတစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း ညွှန်းဆိုခဲ့သည်။
ရည်ညွှန်း။ Foreign Policy
Permalink Reply by Chit Thiri Maung on August 23, 2011 at 16:43
here is main orginal link
and request ebook from zarsoe gmail.com .
Permalink Reply by alison khine on August 24, 2011 at 13:26
Permalink Reply by George Owell on August 27, 2011 at 15:08
Thank you very much for sharing. It isavery useful link for me as I amateacher. Also, I have requested the ebooks at zarsoe@gmail.com
Permalink Reply by 0repc99dowiky on August 23, 2011 at 16:48
Permalink Reply by Thanda Htun on August 23, 2011 at 16:56
Permalink Reply by htay oung on August 23, 2011 at 16:57
၆။ မြသန်းတင့် စစ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး
Permalink Reply by Shwelayaung on August 23, 2011 at 17:07
Permalink Reply by Aung Hlaing Tun on August 23, 2011 at 17:22
Permalink Reply by ABCD on August 23, 2011 at 17:29
Great collection. the thing is , it would bealot better if someone could share the download links for those e-books. Thanks !
Permalink Reply by aye min on August 23, 2011 at 22:49
Permalink Reply by Myo Myint Kyaw on August 23, 2011 at 17:41
အထက်ဖော်ပြပါစာအုပ်များကို ဖတ်ချင်သူများအနေဖြင့်လည်း zarsoe gmail.com ထံ အီးမေးလ်ပို့ပြီးပဲ တောင်းယူလို့ရပါသည်။
၄င်းမှတဆင့် ဒေါင်းလော့ လင့်ခ်တွေ ပြန်လည် ပို့ပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ
Permalink Reply by 1rb0bec0ih5xy on August 24, 2011 at 9:20